Sida loo Delete Photos on macruufka Effortlessly t
> Resource > macruufka > Sida loo Delete Photos on macruufka Effortlessly
Ok. Sidaas oo keliya ayaan updated aan iPod xiriiri 4G in macruufka 6 iyo anigu ma aan garanaynin in isagoo iCloud soo bixi lahaa oo dhan ee photos aan ka computer si iPod, oo haatan uu jiro 2500+ sawirro iPod, waxaana aan lahayn meel music iyo Dalka Chine. Sidee baan u tirtirto ka iPod?
Waa raalli yahay, waayo, waxaad si ay kor aad iPhone, iPad iPod ama in hal ku salaysan arrimo 5, macruufka 6, macruufka 7, macruufka 8 ama macruufka 9. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad la kulanto dhibaato la mid ah sida ay user kor lagu soo sheegay ama haddii aad u badan oo ku kaydiso sawiro aad iPhone, iPad ama iPod, aad ugu dhakhsaha badan Ogaan in kuwan sawiro badan oo gebi ahaanba kaa horjoogsata in loo dhoofiyo aad music jecel, videos, barnaamijyadooda iyo ka badan si aad Phone, iPod ama iPad. Haddii ay dhacdo in this runtii dhacdo, waa in aad rabto in aad tirtirto photos on macruufka.
Apple oo keliya kuu ogolaanaysaa inaad tirtirto Roll sawir Camera ka mid ah oo kale ka dib. Sidaas darteed, oo ay taageerayaan in aad qabto 2500 sawiro, waxaad u leedahay in ay tirtirto 2500 jeer! Waa maxay shaqada weyn yahay! Dhab ahaantii, marka ay taasi dhacdo, hab fudud aad u waa in la isticmaalo ah macruufka 5 photos delete qalab. Halkan, waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin Wondershare TunesGo (Windows) ama Wonershare TunesGo (Mac) . Waxaa aad u saamaxaaya in ay tirtirto sawiro badan ee ku giringiriya Camera ah, Photo Library ama albums abuuray keligaa.
Siyaabo fudud oo lagu baab'iyo sawiradiisii ​​macruufka
In ay qayb ka socda, waxaan kuu sheegi doonaa sida aad u tirtirto sawiro la version Windows ee TunesGo. Haddii aad doonayso in aad qabato hawsha la version Mac, waxaad qaadi karaan tallaabooyinka ka mid ah.
Tallaabada 1. Run barnaamijkan iyo xiriiriyaan iPhone / iPod / iPad in PC
Marka ugu horeysa, download this macruufka qalab u qaadidda sawir on your computer. Markaas rakibi oo abuurtaan. Connect aad iPhone, iPad iPod ama si aad u computer via cable USB ah. Ka dib markii ay ku xiran, barnaamijkan lagu ogaan doonaa iPhone, iPad iPod ama si toos ah, ka dibna u soo bandhigaan uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Mid ka mid ah wax muhiim ah waxaa idinku waajib ah in aad xasuusato in si loo soo dajiyo Lugood on your computer hor inta aadan isticmaalin TunesGo.
Tallaabada 2. macruufka tirtirto sawiro
Si aad u tirtirto sawiro ku saabsan arrimo 5, macruufka 6, macruufka 7, macruufka 8 ama macruufka 9, waa in aad ku dhufo "Sawirro" on geedka buugga bidix inay soo qaadaan suuqa kala maamulka sawirka. Dooro photos in aad rabto in aad tirtirto. Halkan waxaan ku qaadan tirka photos Maktabadda Photo sida tusaale. Fur Library Photo iyo xulo sawirada aan la rabin. Markaas, guji "Delete". Barnaamijkan wuxuu bilaabi doonaa inuu baab'iyo sawiradiisii. Waxaad si fiican ma barkinta lahaa aad iPhone, iPad ama iPod sawirka saarista dhamaado ka hor.
Fiiro gaar ah: TunesGo si buuxda u taageersan oo dhan Apple daydo socda macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, macruufka 8 ama ka macruufka dambeeyay 9, sida iPhone 5s / 5c, iPod xiriiri 5 iyo iPad bandhigay isha.
Great! Waxaad u suurtagashay in ay tirtirto macruufka 6 photos arrintan macruufka 6 qalab sawirada tirtirto. Hadda, waxaad samayn kartaa si aad iPhone wareejiyo songs, playlists iyo video , iPad iyo iPod doono.
Download version ku raad free of TunesGo!
Raac Video ah in ay tirtirto Photos on macruufka